फिल्मसँग मन साटेकी शर्मिला !
By soniya on	 4th February 2020 समाचार, सेलिब्रिटी
पुरुषप्रधान नेपाली फिल्ममा लैंगिक पर्खाल भत्किएको छ । पचास वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली फिल्म महिलामैत्री बन्न थालेको छ । लगानी, निर्देशन र अभिनय विधा महिलाप्रधान बन्न थालेका छन् । फिल्म निर्माणमा महिला सहभागिता सामान्य होइन । लगानीको यो ग्राफमा निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको नाम अग्रणीरुपमा लिन सकिन्छ ।
लभ लभ लभ, घर, चंगा चेट र आमा फिल्म निर्मात्री हुन् पाण्डे । व्यापारको पृष्ठभूमि भएपनि उनमा यतिबेला फिल्म निर्माणको दौड सुरु भएको छ । होम–प्रोडक्सन फिल्म निर्माण कम्पनी डीएस डिजिटल मार्फत शर्मिलाले फिल्म निर्माण गरिरहेकी छन् । उनका फिल्मले बक्सअफिस र समिक्षकमाझ प्रशंसा बटुलिरहेका छन् ।
‘सानैदेखिको फिल्म सपना अहिले पुरा भैरहेको छ र अब भने यसैलाई व्यवसायको रुपमा अगाडि बढाइरहेकी छु’ मूभिमान्डुुसँग पाण्डेले भनिन्, ‘फिल्म निर्माणमा महिलाको सहभागितालाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु र यसका लागि म सक्रिय छु ।’ पाण्डेको परिवारै अहिले फिल्म व्यवसायमा होमिएको छ । छोरा सुरज हिरो भैसके जो फिल्म निर्देशनको तयारीमा जुटेका छन् । पति अमृतको साथ मिलेको छ शर्मिलालाई ।
महिलालाई परिवारको साथ मिलेपछि अघि बढ्न सजिलो भैहाल्यो । यो सजिलोलाई उनले पारिवारिक व्यवसायसँगै फिल्ममा लगाइरहेकी छिन् । सानो आकारको नेपाली फिल्मलाई विस्तार गर्नुछ शर्मिलालाई । उनले यसका लागि नेपाली फिल्मलाई नेपाली सीमाभन्दा बाहिर लैजान चाहन्छिन् । नेपाली फिल्म, विषयवस्तु र कलालाई विदेशमा चिनाउने धोको छ उनको । अमेरिका जान मेक्सिको हुँदै हिँडेर जाने कन्टेन्टमा उनी ‘हिँडेर अमेरिका’ बनाउँदैछिन्, जुन प्रि–प्रोडक्सन चरणमा छ ।
शर्मिलाको फिल्मप्रतिको आकर्षण सानैदेखि भएपनि जम्प भने पशुपति प्रसाद फिल्मदेखि सुरु भयो । यो फिल्मले उनको मन यतिसम्म जित्यो कि निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालसँगै उनी व्यवसायिक टीमअप गरिरहेकी छन् । शर्मिला र दीपेन्द्रको यो जुगलबन्दीले माथि प्रस्तुत चार फिल्म दर्शकमाझ पस्किइसकेको छ । व्यापार र कलालाई सन्तुलन मिलाउने यी चार फिल्मबाट शर्मिला सन्तुष्ट छिन् । फिल्म निर्माणको यो धोको सजिलै मेटिनेवाला छैन उनको । यसका लागि बैशाखदेखि नयाँ फिल्मको छायांकन सुरु हुँदैछ । उपकरण व्यापारलाई अझै विस्तृत गर्नुछ उनलाई ।
घर बन्दोबस्तीमा व्यस्त हुनुपर्ने आम नेपाली महिला विपरित शर्मिला भने फिल्म निर्माणमा सक्रिय छिन् । जुन कुरा अन्य महिलाका लागि पनि सिक्नयोग्य छ । फिल्म निर्माण, सुटिङ हुँदै हलसम्म रिलिजको हैरानीको कथा सुनाएर साध्य छैन उनलाई । त्यसमा पनि खटेर फिल्म दर्शकसामु लैजानु एउटा महिलाको लागि कष्टसाध्य हो । शर्मिलाको अठोट रोकिएको छैन बरु उनी आफ्नो कम्पनी डीएस डिजिटलमार्फत फिल्म निर्माणलाई अझै विकसित बनाउन चाहन्छिन् ।
उनको पछिल्लो फिल्म हो आमा । कम्प्युटर टेबुलमा आमा हेरेपछि धेरैपटक रोइन शर्मिला । उनलाई लाग्छ, प्रत्येक नेपाली आमालाई फिल्मले छुन्छ । यो फिल्ममार्फत आमाप्रतिको माया सबैसामु महसुस गराउनुछ शर्मिलालाई । भन्छिन्, ‘फिल्मले कमाउला, नकमाउला । पैसासँग मतलब छैन । मुख्य कुरा दर्शकले फिल्म रुचाउनुपर्‍यो । मनलाई छुन सक्नुपर्‍यो । पैसाको लागि फिल्म बनाएको हैन । मनको सन्तुष्टिको लागि म फिल्ममा सक्रिय छु ।’
शर्मिला भन्छिन् : फिल्म पैसा हैन, कला हो ।